I-La habitación de la roggia - I-Airbnb
I-La habitación de la roggia
Igumbi lakho lokulala e i-townhouse sinombuki zindwendwe onguJacopo
Ijikelezwe zizo zonke izinto ezinokusetyenziswa (ibhari, amayeza, indawo yokuhlamba iimpahla, ivenkile yokutyela, ivenkile enkulu, umbhaki, iziko lenkcubeko, i-fablab), igumbi likumgama okufutshane ne-Humanitas Hospital kunye ne-Assago Kaen. Ime ecaleni kwendlela yokuhamba ngebhayisekile yenkcubeko yaseNaviglio Imperese edibanisa iMilan ukuya eMilan.
Igumbi likumgangatho ongasentla kwaye linebhalkhoni negumbi lokuhlambela labucala elineshawa, ibhedi elala abantu ababini, itafile, i-microwave, ifriji, umatshini wokwenza ikofu kunye nezinto zokutyela.
Igumbi le-Roja yindawo yokwamkela abahambi bezoshishino, abahambi abafundayo nabakhenkethi.
Ijikelezwe zizo zonke iinkonzo (ibhari, amayeza, indawo yokuhlamba iimpahla, ivenkile yokutyela eqhelekileyo, ivenkile enkulu, i-hairdresser, i-baker, iziko lenkcubeko, i-fablab kunye ne-coworkig), ngumgama wokuhamba ukusuka kwi-Humanitas Hospital (ibhasi), i-Assago Kaen kunye nesixeko sase-Milan.
Eli gumbi lisezinyathelweni ezimbalwa ukusuka kwisikhululo esitsha se-15th tram esiya ePiazza Fontana, emva kweDuomo yaseMilan. Iibhasi ziyasebenza kude kube sekupheleni.
Onke amatikiti ezithuthi zikawonke-wonke anikezelwa ngababuki zindwendwe ngaphandle kokubhataliswa enye imali.
Indawo yokupaka isoloko isimahla (kukho isithuthuthu xa sifunwa).
Eli gumbi likwiimitha eziyi-100 ukusuka kwindlela yokuhamba ngebhayisekile ehamba kwi-Alzaia Naviglio Imperese kwaye idibanisa iMilan ukuya eMilan, idlula kwi-certosa yaseColumbia kunye nobuhle beFama Park.
Inkcazelo ngeebhayisekile, i-ecotourism kunye neendlela zokukhenketha zenkcubeko zinikezelwa ngababuki zindwendwe.
Iibhayisekile zifakwa xa ziceliwe.
Igumbi likumgangatho ongasentla wendlu ibe linxulumene neflethi okanye indlu ekwicomplex yombuki zindwendwe ngezitepsi zangaphakathi ezinomnyango olala abantu ababini. Iindwendwe zineendawo ezimalunga neeskwe mitha eziyi-25, ezilungiswe kwindawo yokulala enebhedi elala abantu ababini, isipili, isitulo esinamavili, indawo yokubeka impahla netafile esecaleni kwebhedi, nendawo yokuhlala enetafile, i-microwave oven, ifriji encinci nezinto ezisisiseko zesidlo sakusasa nesidlo sakusasa.
Igumbi linegumbi lokuhlambela labucala negumbi lokuhlambela, elinendlu yangasese, isinki, ishawa, umatshini wokomisa iinwele kunye nezinto zangasese.
Ukutshaya akuvumelekanga ngaphakathi, itafile ene-ashtrays ikwibhalkoni yabucala yegumbi.
Ukuba uhlala nathi ngaphezu kweveki, uza kuba nenkonzo yokucoca etshintshe iitawuli namashiti. Ngomhla obonisiweyo, undwendwe kuza kufuneka lukuxelele ukuba luzimisele ukwamkela inkonzo luze lushiye umnyango wegumbi lalo uvuliwe.
Kwisidlo sakusasa esicacileyo, kuza kubakho iti, ikofu neswekile egumbini, kuquka izimuncumuncu okanye izimuncumuncu.
Ukwabelana ngeekhekhe ezenziwe ekhaya okanye isidlo kunye akuyiyo inkonzo, kuyavuyisa ukuthetha kunye.
Umatshini wokuhlamba – Ukwisakhiwo
4.95 · Izimvo eziyi-93
Indlu yethu ikwindawo enembali yaseRozzano, phambi kweCascina Grande, ifama yakudala yaseLombard ebiyindawo kawonke-wonke enethala leencwadi, ipaki, igumbi lenkomfa kunye nendawo yemiboniso. Amanyathelo ambalwa ukusuka ekhaya yindawo yokutshixa yakudala kwinqanawa ukusuka apho indlela yokuhamba ngebhayisekile edibanisa iMilan ukuya eMilan idlula khona
Umbuki zindwendwe ngu- Jacopo
Hlola ezinye iindawo onokukhetha kuzo e- Rozzano